शिक्षासेवी कायस्थको निधन | eAdarsha.com
शिक्षासेवी कायस्थको निधन
पोखरा, १५ साउन । पोखराका शिक्षासेवी प्राडा राधेश्याम कायस्थको निधन भएको छ । पोखरा नयाँबजारस्थित चरक मेमोरियल अस्पतालमा बिहीबार बिहान ४ बजे उनकोे निधन भएको हो । उनी ७८ वर्षका थिए । लामो समयदेखि दम रोगबाट पीडित उनी ५ दिनअघि अस्पताल भर्ना भएका थिए ।
पोखरा नदीपुरस्थित न्यू ग्यालेक्सी माविका संस्थापक र प्रमुख संरक्षक स्व. कायस्थ पोखराको पुरानो शिक्षासेवी रुपमा चिनिन्छन् । उनले जीवशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका थिए । पोखराको शैक्षिक विकासमा उनले महत्वपूर्ण योगदान दिएको न्यू ग्यालेक्सी माविका सहायक प्रिन्सिपल राजेश भण्डारीले बताए ।
उनी पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा सहायक क्याम्पस प्रमुख, विज्ञान संकायका डीन हुनुका साथै माउण्ट अन्नपूर्ण क्याम्पस, फूलबारीमा पूर्व क्याम्पस प्रमुख भइ सेवा गरेका थिए । साथै पोखरा विश्वविद्यालयको सिनेटर सदस्य थिए ।
जापानको री कियु युनिभर्टिनीको भिजिटिङ साइन्टिष्ट थिए । परिवारमा उनका श्रीमती लक्ष्मीमाया कायस्थ, छोराहरु सञ्जीव कायस्थ, राजु कायस्थ, छोरी प्रतिभा श्रेष्ठ एवं नातिनातिना छन् ।
स्व. कायस्थको बिहीबार नै पोखरा सेती नदी किनार तुल्सीघाटमा अत्येष्टि गरिएको छ ।